Kedu nọmba Amazon ID?
Dịka Onyeahịa Amazon, ị kwesịrị ịma na ngwaahịa ọ bụla dị na Amazon nwere nọmba ID ya. Enwere ike iji ihe omumu ahia meputa ihe ndi ozo na akwukwo. Ọtụtụ edemede na Amazon nwere kpọmkwem UPCs. Nanị onye na-emepụta ihe ziri ezi nke Amazon UPC ndị dị n'ụwa nile bụ GS1 (Global Standard 1). Ụlọ ọrụ a na-enye iwu zuru ụwa ọnụ maka nkwụsịtụ ịnye ihe. Global Standard 1 na-ewepụta ihe ọ bụla dị na Amazon na Ahịa Ụwa - review ego one vt vape.
Iji soro GS1 chọrọ, ịkwesịrị iburu n'uche ụdị ngwaahịa ịchọrọ ịkwaa ahịa, àgwà data gị ngwaahịa, na ihe ndị a chọrọ maka ire n'ahịa ahụ.
N'isiokwu a, anyị ga-akọwa ọrụ GTIN na UPC maka nkwalite ngwaahịa gị na ntanetịzụ ahịa zuru ụwa ọnụ Amazon.
Otú ọ dị, tupu anyị aga n'ihu n'ihu, m ga-achọpụta na Amazon ga-amalite ịfefe UPC koodu nyere ndị ASINs dị iche iche n'ahịa ha megide GS1 nchekwa data. O nwere ike ịpụta na onye ọ bụla na-ere ihe na-enweghị ezigbo UPC koodu nwere ike wepụrụ site na search results nke Amazon.
Amazon UPC Code: gini ka ha bu na gini mere anyi ji cho ha?
Code UPC bụ akara akara nchịkọta nke a na-ahazi maka ihe ọ bụla. E jiri ya na United States, UK, Canada, Australia, New Zealand, na mba ndị ọzọ na-asụ Bekee. Ọ na-agụnye nọmba iri na abụọ nke na-egosi prefix ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ihe ederede, ma chọpụta nọmba. Nọmba ọnụọgụ mbụ nke GS1 nyere ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka akara nwere akara ngwaahịa na akara UPC.
Nọmba ise sochirinụ na-egosi ihe ntụgharị aka. Ha na-enye ha ikike ka ha kwuo otu ihe.
A na-akpọ nọmba nke ikpeazụ akara ego. Ọ bụ ọnụọgụ gbakwụnyere dabere na ngwunye MOD maka nyocha ọnụ ọgụgụ si na nchịkọta ndị bu ụzọ.
UPC Code nwere ike ịbụ nke abụọ - UPC-A na UPC-E. Ihe dị iche bụ na UPC-E koodu dị mkpụmkpụ ma enwee ihe efu efu. Ọ pụtara na ị gaghị ahụ ihe dị n'ime 0, naanị n'ime GTIN kwekọrọ.
Gịnị bụ ASIN (Nọmba Ama Ama Ama)?
Ọnụ Ọgụgụ Ama Ama ama maka iji chọpụta ihe dị na Amazon. Ha na-agbaso ihe puru iche nke mkpụrụedemede 10 na nọmba. Code ASIN maka ihe achọrọ achọta ịchọta na ibe Amazon info page. Ekwesiri ighota na akwukwo Amazon jiri ISBN kpoo. Ụdị njirimara ọkọlọtọ bụ otu maka akwụkwọ ndị dị ka ISBN. Otú ọ dị, maka ihe ndị ọzọ niile, a na-emepụta nọmba ọhụụ ọhụrụ mgbe a na-ebute ihe a na Amazon.
Ejiri koodu ASIN nke dị na nkọwa ngwaahịa ahụ n'etiti nkọwa ngwaahịa ndị ọzọ dị ka agba, nha, wdg. A pụrụ iji koodu a chọọ ngwaahịa na Amazon catalog. Site na ịpị koodu ASIN ma ọ bụ ISBN dị na igbe nyocha Amazon, ị ga-enweta nsonaazụ ọchụchọ achọrọ na koodu a (ọ bụrụ na ngwaahịa depụtara na kọntaktị).